WAA MAXEY FARQIGA U DHEXEEYA XISBUL ISLAAMKA HASAN DAHIR IYO KOOXDA AL-SHABAAB?.. | Toggaherer's Blog
« RADIO HARGEYSAAY HADALLADAA XAJIINTA LEH, HAL-BAA LAGAA YIDHI
GALIILYO WAA MAANSO IFTIIMINAYSA CAWAAQIB XUMADA HEYB SOOCA ABWAAN C/LAAHI SALEBAN BIDDE »
WAA MAXEY FARQIGA U DHEXEEYA XISBUL ISLAAMKA HASAN DAHIR IYO KOOXDA AL-SHABAAB?..
Waxaa jira in labadii baadil ku heshiisa ay aakhirka xaqa ku coloobaan. Sheikha Hogaamiya ururka Xisbil Xasuuq ee Hasan Daahir Aweys iyo kooxda aragagixisda ah ee Al-Shaabab ayaa ku jira dagaal xabadiisu isku jiho tahey balse ujeedadiisu kala duwan tahey. Dagaalka labadan kooxood wadaan oo la hubo inuu sahayan doono Somali badan balse aakhirka ku dhamaan doona guul daro labadoodba ku hubsta, ayaa waxaa mudan in la is weydiiyo horta labada kooxood ma isku ujaada?.
Haa marka dhan laga eego labada kooxood waa isku ujeedo mar hadii ay labaduba xukun doon yihiin. Hadana Maya oo xukun doonimada labada kooxood ayaa ah mid uu u dhexeeyo farqi weyn oo hadiiba ay iyagu ay guuleystaan keeni doonta iney isla markiiba ay xabadu dhexdooda ka qarxi doonto. (Laba Baadil ku heshiisey xaqa ayey ku cooloobaan). Aynu eegno farqiga u dhexeeya iyo mid kasta sida uu aakhirka guuldayreys doono.
Sheikh Hasan Daahir Aweys ayaa riyada uu u dagaalmaya ay tahey kursi doon shaqsi ah, kaas oo ah inuu mar uun Madaxweyne ka noqdo dhul weynahii Somaliyeed ee goor hore lagu kala dhaqaaqey (Waa Riyo nooca la yidhaa hadii aan kun million oo Dollar ku guleysto sidaas ayaan yeeli lahaa, waa riyo lagu riyoodo nooca u beenta badan). Riyadaa Xasan Daahir Aweys ma aha mid la yaab ku ah rayil caamka gaar ahaa dadka reer Muqdisho ama Somalida koonfureedba. Waayo?. Waxaa jirey oo ay u soo joogeen Ma quustayaal ama Ma naxayaal fara badan oo isaga ka horeeyay oo dhiig faraha u geliyey si ay u noqdaan Madaxweyne. Ma quuste kastana waaqiciga ayaa riyadiisa been ka dhiga.
Kooxda Al-Shabaab ee Rabigu ka suuliyey naxariistii Islaamnimo iyo tii bani`Adamnimo, ayaa iyagu arintoodu tahey wax ku cusub Somalida oo ka baxsan dhaqankeeda iyo nolasheediiba. Ujeedada kooxdan ayaa ah iney dadka u qeybiyaan laba qeybood. Qeyb iyaga raacda iyo qeybta kale oo ay rabaan iney cidhib tiraan. Ma aha ujeedadu in qof xukun qabto, balse ujeedaduu waa iney Somalida dooriyaan ka dibna iyagu u daliil noqdaan. Ma aha dagaalkoodu mi keenaya horumar, waa mid keliya mudgi sii galinaya jirtaanka qofka Somaliga ah ee markiisii horeba aduunka ku noqdey barta madow. Waa koox aad uga ujeedo fog, kooxda kale ee hada aya is garabsanayaan. Marka intaa lagu dhaafo kala duwaananshaha labada kooxood aan ka sii hadalo in yar oo ku saabsan kooxda Al-Shabaab iyo bal mustaqbalka dagaalada socda. Alle ayaa huba wixii dhacaya balse mala awaalku waa owooda qofka bini`aadamka ah.
Somalidu waxey ku maahmaahda (Wixii la arki jirey waxooda lagu akhriya, wixii aan la arki jirana min subxaanale ayaa lagu akhriyaa). Waa shey Cajiiba oo aanu caqliga saliimka ahi aqbali karin, in qof muslin sheeganaya uu isku qarxiyo umada kale oo muslina oo maati, madax, sheikh iyo shariifba leh. Waxaa jira Xadiis odhanaya. In Rasuulkii Alle, SCW uu maalin la hadley kabacada isagoo leh. ”Kabcooy maxaa Alle agtiisa kaga weyn in adiga lagu dumiyo”. Waxa uu Rasuulku CSW hadana yidhi. ”Ilaah baan ku dhaarte waxa Alle agtiisa dumintaada kaga weyn qof muslina oo dhiigiisa si aan sharci aheyn lagu daadiyey”. Miyaaney cajiib aheyn in umad muslina oo ay ku jiraan qaar Salaadii u danbeysay oogey in dhiigooda si hawl yar maalin kasta loo qubo. Miyaaney cajiib aheyn in kuwa sidaa yeelaya ay ku doodayaan iney Kitaabka Alle (SWT) iyo sunada Nabiga (CSW) ay kor u qaadayaan. Hal su`aala oo keliya is weydii. Rasuulka csw, reer Makka ama gaaladii Carbeed ficil kasta oo xun weyn ku sameeyeen. Maxaa loo waayey Saxaabi qudha oo Rasuulku uu ku amro inuu is Qarxiyo. Mise diintaba iyagaa Rasuulkii Alle ka badiya!!!!.. Waxaa Somalida badankeedu ku sigan laheyd iney kooxda ku biirto hadii ay dagaalkooda ka saari lahaayeen laba shey. 1.In qof kasta oo aan ka tirsaneyn ay ku sheegaan Gaal badhax tiran iyo 2.In inta ay caruur yaryar iyo dad caqi gaaba ay miino ku wareejiyan ay ku Qarxiyaan meel Somali ashahaadaneysaa ay ku dhimaneyso, ka dibna ay ku sheegaan Shahiid janadii dhex dabaashey.
Gebagabdii iyo guntii , waxaan la hubaa, Alle ayaa la hubaaye in goor aan fogeyn ay isku dhici doonaan labada kooxdood ee Sheikh Hasan Dahir iyo kooxda kale ee ujeedada fog wadata ee Al-Shaabab sheegata, waxa kale oo la hubaa in Somalida Koonfureed ee nasiibka u yeeltay dilka iyo dhibtu iney dhawaan arki doonaan iyadoo, hirdanka dagaalka ay ku soo biireen Ciidamo shisheeya ah oo adeegsan doona hub ka khatar iyo waxyeeloba badan, kan hada Somalida waalini isku xasuuqeyso, hubkaas oo raad ku reebi doona dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan. Dagaalka ayaa ku soo Afgoi doona in hadana laga soo bilaabo zero iyo meel madhan. Meel laba Maroodi ku hirdameen cawska ayaa dhamaada. Dadka shicibka ah waxaa ku waajiba iney isku ujeedo noqdaan oo ay ka hortaan cid Alle iyo cid kasta oo aan rabin in dhulkoodu helo nabad iyo deganaan. Macal cune soo bixi doona. Allow cidii xaq daro wada gaal iyo islaamba cidii baabin karta ku salid.
Dalka aad ka dhalatey
Dalka aad u dhalatiyo
Nin la yidhi dalka u tali
Ha duleyne gaadhsii
U galeen dagaalkii
Diiftiyo kulka lahaa
Guul baa u dagatee
Alle doori sowkaa
Darka jiidhey maaweel
This entry was posted on June 21, 2009 at 3:52 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.